Realme amalitela Narzo 10 na 10A, ebe ọhụụ ya | Gam akporosis
Realme Narzo 10 na 10A, nke ọhụrụ na ọnụ ala dị n'etiti nke Mediatek Helio chipsets kwadoro
Realme amalitela ekwentị ọhụrụ abụọ awa ole na ole gara aga. Ndị a bụ Narzo 10 na 10A, duo ohuru nke na-abanye n'etiti uzo di oke onu ahia.
Mwepụta nke ụzọ a na-amalite usoro nke ha so, nke bụ Narzo. Ekwuputara nke a ogologo oge gara aga na njedebe mpụta na ngwaọrụ ndị a, nke nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye ma gosipụta atụmatụ dị iche iche na nkọwapụta teknụzụ nke kwekọrọ na ụbọchị nke onye ọrụ ọ bụla.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Realme Narzo mobiles
1.1 Nkeji 10
1.2 Nhazi 10A
1.3 Nka na ụzụ
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Realme Narzo mobiles
Ndị ọnụahịa ọhụrụ a adịghị ọnụ nwere ọmarịcha anụ ahụ, ọ bụ ezie na ha dị iche ntakịrị n'ihi modulu igwefoto dị iche iche ha na-eji ma anyị ga-akọwa n'okpuru.
Ha abụọ yiri nnọọ na ọkwa teknụzụ. Ya mere, ha nwere ọtụtụ àgwà, mana, dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ha nwekwara ọtụtụ isi okwu.
10 bu eziokwu
Anyị ga-amalite site n’ikwu banyere Realme 10, ụdị kachasị dị elu nke ngwakọta a nke na-abịa na chipset Helio G80 nke Mediatek dere, octa-core processor nke mejuputara Cortex-A75 abuo na 2 GHz na isi ozo Cortex-A55 isii na 1.8 GHz. Nodu onu ogugu nke a bu 12 nm, n'otu oge nke Mali-G52 GPU 2 MHz dual-core MP950 na-arụ ọrụ nke egwuregwu na-agba ọsọ na ọdịnaya ọdịnaya.
Ihuenyo nke ihe nlereanya a nwere diagonal nke 6.5 sentimita. Nkà na ụzụ nke a bụ sentimita 6.5. Na mgbakwunye, mkpebi ọ na - eweta bụ HD + nke 720 x 1,600 pikselụ, nke na - eme ka akụkụ 20: 9 dị ugbu a. Maka ihe a niile, anyị ga-agbakwunye ojiji nke ọkwa n'ụdị mmiri mmiri na akwa bekee ndị anyị na-ahụ na ala na ọkara.
Realme Narzo 10 nwere 4 GB LPDDR4 RAM kaadị ebe a jikọtara ya na ebe nchekwa dị n'ime nke 128 GB (gbasaa site na kaadị microSD) yana nnukwu batrị ikike 5,000 mAh na nkwado maka teknụzụ na-ebu ọkụ ngwa ngwa nke 18-watt nke na-enye ntụgharị wired na-agbanwe agbanwe, ihe a na-ahụbeghị na nso a.
Ekwentị kwadebere ya na igwefoto quad nke a na-eduzi site na a Isi ihe 48 MP nwere oghere f / 1.8. Ihe mkpali a na-esonye ya na ihe nrịba ama nke nwere ọkwa dị mkpirikpi nke 8 MP, lens monochrome (B / W) na igwefoto macro 119 MP nke ọrụ ya bụ iji were foto nso 2 cm. Ngwaọrụ nwere ike idekọ vidiyo FullHD na 4fps. Na mgbakwunye, igwefoto onwe nke Narzo 30 bụ megapixels 10 nke mkpebi ma nwee oghere f / 16.
Ekwentị ahụ nwekwara ọtụtụ nhọrọ ikwu okwu, nke gụnyere nkwado maka Dual 4G / Dual Standby, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, GPS, ụdị USB C na isi okwu isi. Sistemụ arụmọrụ ya bụ Android 10 n'okpuru Realme UI, interface nke ụlọ ọrụ ahụ. Enwekwara onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ ma ọ na-abịa na agba ọcha (ọcha) na nke ahụ Green (green).
Na ama a anyị hụrụ otu ihuenyo dị na Narzo 10, nke bụ 6.5 sentimita asatọ, nwere mkpebi nke 720 x 1,600 pikselụ, nwere nhazi 20: 9 ma nwee akara ngosi mmiri na otu bezels.
Chipset na-agbanwe na ihe nlereanya a, na-agbadata. Ọ bụ ya Helio G70 nke Mediatek dere na-ahụ maka inye ya ike zuru oke site na mgbagwoju ya nke nwere isi asatọ bụ nke e kere eke dị ka ndị a: 2x Cortex-A75 na 2 GHz + 6x Cortex-A55 na 1.7 GHz, ya na GPU nwere ọnụọgụ abụọ na 850 MHz. Nke a na-abịa na 4 GB nke Ram na ebe nchekwa dị n'ime nke 128 GB.
Usoro ihe onyonyo nke Realme Narzo 10A abughi okpukpu ano, mana okpukpu ato. Ihe mmetụta ya bụ 12 MP na f / 1.8, si otú a dochie 48 MP anyị hụrụ nwanne ya nwoke nke okenye. Ndị ọzọ bụ lens MP 2 (f / 2.4) na 2 MP / f2.4 bokeh sensor maka ubi na-enweghị mmetụta. Ọ na-edekwa vidiyo FullHD na 30 fps ma nwee igwefoto selfie 5 megapixel nwere oghere f / 2.4.
Batrị ahụ bụ otu: batrị 5,000 mAh, mana nke a na-abịa na 10 W na-ebu ọnụ ngwa ngwa, ọ bụ ezie na ọ na-ejigide ngwa ngwa ngwa ngwa na eriri. Sistemụ arụmọrụ na interface dịkwa gam akporo 10 na Realme UI, ebe nhọrọ njikọta akọwara na Narzo 10 ka dị. Enwekwara onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ. Nhọrọ agba dị iche iche nke a na-enye ihe nlereanya a bụ White (ọcha) na Blue (acha anụnụ anụnụ).
AHALR 10 XNUMX
IKIRU In-CELL LCD 6.5 sentimita asatọ na mkpebi HD + In-CELL LCD 6.5 sentimita asatọ na mkpebi HD +
Nhazi Mediatek Helio G80 Mediatek Helio G70
Ohere TERLỌ N'IME 128 GB 32 GB
GHARA CAMERAS 48 MP Quadruple + 8 MP Wide Angle + B / W na Bokeh Sensor + 2 MP Macro 12MP Nkeji Atọ + 2MP Bokeh + 2MP Macro
N'ihu CAMERAS 16 MP (f / 2.0) 5 MP (f / 2.4)
UMUAKA 5.000 mAh na ụgwọ ngwa ngwa 18-watt ma gbanwee ụgwọ 5.000 mAh na ụgwọ ngwa ngwa 10-watt ma gbanwee ụgwọ
OS Android 10 n'okpuru Realme UI Android 10 n'okpuru Realme UI
Njikọ Dual 4G-Dual Njikere / Wi-Fi 4 / Bluetooth 5.0 / GPS Dual 4G-Dual Njikere / Wi-Fi 4 / Bluetooth 5.0 / GPS
Atụmatụ ndị ọzọ N'azụ mkpisiaka Reader / Nghọta ihu / USB-C / 3.5mm Jack N'azụ mkpisiaka Reader / ihu gnitionghọta / USB-C / 3.5mm Jack
Mbibi na ibu ibu 164.4 x 75.4 x 9 millimita na gram 199 164.4 x 75 x 8.95 millimita na gram 195
A malitere Realme Narzo 10 na 10A na India, ahịa nke ha dị maka ịzụta na ahịa ndị a:
Nzọụkwụ 10: 11,999 Indian rupees (~ 146 euro ọnụego mgbanwe)
Nkezi 10A: 8,499 rupees Indian (~ 103 euro na ọnụego mgbanwe)
Amabeghị mgbe ha ga-enye ha n'ahịa mba ụwa, mana o doro anya na ha ga-erute ọkwa zuru ụwa ọnụ ma emesịa. Eleghị anya n'ime izu ole na ole sochirinụ, anyị ga-enweta ụfọdụ ozi gbasara ya, mana, ọ bụ ezie na nke a abụghị ikpe, anyị ga-echere ọkwa ọkwa gọọmentị. Ọ ga-ebu ụzọ gbasaa na ahịa ndị China, wee banye na Europe wee gafee ụwa ndị ọzọ, nke bụ ụkpụrụ nke onye nrụpụta na-esokarị smartphones ọhụrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Realme Narzo 10 na 10A, nke ọhụrụ na ọnụ ala dị n'etiti nke Mediatek Helio chipsets kwadoro
Soro mpi na oge ọzọ megide ndị golf ndị ọzọ na Swing zuru oke